Izinhlelo zokusebenza ezibalulekile ze-Android okumele zifakwe yebo noma yebo | Izindaba zamagajethi
Izinhlelo zokusebenza ezibalulekile ze-Android
Sinezinkulungwane nezinkulungwane zezinhlelo zokusebenza esitolo se-Google esibizwa nge-Google Play Isitolo, kepha, phakathi kokuningi, kukhona okukhonjiswa njengokubalulekile, futhi lokho kuyadingeka ukuthi bafakwe Ngenxa yokusebenza kwabo okuphezulu nokuthi bahlinzeka kanjani ngezici ezithile ezikhethekile kudivayisi yethu ye-Android.
Kuningi, okufana ne-WhatsApp njengohlelo lwemiyalezo yamahhala, IDropbox njengesibonelo sokugcina sokuthi iyini isitoreji sefu noma i-Evernote njengohlelo lokusebenza lokudala noku-oda zonke izinhlobo zamanothi umsebenzi wazo ohluke kakhulu kuye ngezidingo zethu. Sizolanda izinhlelo ezimbalwa ezibalulekile okumele ngabe uzifakile yebo noma yebo efonini noma kuthebhulethi yakho.
Sizokukhombisa ezimbili zomkhakha ngamunye ezibalulekile nokuthi kufanele ukuthi uzifake kumatheminali akho, nokuningi uma uqala ukuthatha izinyathelo zakho zokuqala emhlabeni we-Android, kusukela kwesinye isikhathi akulula ukuhlukanisa ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza Kuyadingeka ukwenza umsebenzi othile ngenxa yamakhulu ezinkulungwane onawo ku-Google Play Isitolo.
1 Imiyalezo eku-inthanethi
2 Amanethiwekhi omphakathi
4 Isitoreji samafu
5 Ukubhala amanothi
6 Izindaba kanye nabafundi be-RSS
7 Iziphequluli zewebhu
8 Izidlali Zomsindo Namavidiyo
9 Izinhlelo zokusebenza zokuthatha izithombe
10 Abafundi be-E-book
11 Isitoreji sesithombe
WhatsApp: Insizakalo yemiyalezo eku-inthanethi ethandwa kakhulu iyatholakala futhi lokho kuyabonakala ngenxa yesisindo esincane sohlelo lokusebenza nomthwalo omncane ocabanga ukuthi ufakwe ku-terminal yethu.
I-BBM: Uma ufuna insizakalo yeposi ngemiyalezo ebethelwe Futhi lokho kuphephe ngokuphelele, lena yiBlackBerry Messenger, esanda kwethulwa ku-Android naku-iOS futhi ethola ukwamukelwa okuhle kakhulu.
Facebook: Ongakusho nge-Facebook okungaziwa, futhi-ke bekungeke kulahleke kulesi sigaba, ngoba kukuvumela ukuthi ube nakho kwi-smartphone noma ithebhulethi yakho kunethiwekhi ethandwa kakhulu emhlabeni. Yize kungasetshenzwa kangcono, inezinto ezibalulekile.
Pinterest: Singabeka i-Twitter lapha, kepha iPinterest iyasebenza njengenethiwekhi yokuxhumana nabantu nokuthi iyithuluzi elihle lokufuna ugqozi futhi wabelane ngalo nabanye, njengoba beziveza ku-Google Play Isitolo.
I-Twicca: Lolu hlelo lokusebenza lwenethiwekhi yama-tweets, kungenye yezinto ezinhle kakhulu futhi ebikade nathi isikhathi eside kakhulu ku-Android. Inakho konke ongakucela nge-interface elula okulula ukuyiphatha.
TwitterIsicelo esisemthethweni se-Twitter besingeke sibe kulesi sigaba uma kungenjalo ngoba muva nje Kuvuselelwe ngokuphelele ku-Android futhi kungaba yindlela ebalulekile.
eyinqolobane: Uma i-WhatsApp ihamba phambili ekuthumeleni imiyalezo naku-Facebook kumanethiwekhi omphakathi, I-Dropbox yisevisi yokugcina efwini elibaluleke kakhulu le-Android, ukutholakala njenge- isicelo esibalulekile samadivayisi wakho weselula ukwaba amafolda nokwandisa umthamo wokugcina.
I-Jottacloud: Akwaziwa kahle, kepha le yinkampani yaseNorway enesevisi enhle yokugcina amafu futhi iyindlela enhle unikeza i-5GB mahhala ngokwakha i-akhawunti.
Evernote: Elinye lamagama amakhulu uma kukhulunywa ngokufakwa kohlelo njengokufanele yi-Evernote, ne ikhono elikhulu lokwenza amanothi, uzihlunge ezincwadini zamanothi bese wabelana ngazo nabasebenzisi abaningi ukudala ukusebenzisana okungakaze kwenzeke ngaphambili.
-Google Keep: Enye yezinsizakalo ezintsha ze-Google yi-Keep, ukudala amanothi, nge idizayini enhle kakhulu enakho konke okudingekayo ekusetshenzisweni kwalolu hlobo.
Izindaba kanye nabafundi be-RSS
I-Flipboard: With lolu hlelo lokusebenza unga zenzele owakho umagazini ngemithombo ehlukene yazo zonke izinhlobo zolwazi ngisho neyakho uqobo. Ngekhwalithi ebonakalayo ebonakalayo, i-Flipboard ingenye yezinto ezibalulekile ze-Android.
I-gReader: Uma ufuna umfundi wokuphakelwa kwakho kwe-RSS, i-gReader uhlelo lokusebenza olunomklamo oqaphile obonakala ngokuguquguquka nokushesha okuphathwa ngakho, unezinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso nokulungisa.
Isiphequluli seDolphin: Sine-Google Chrome, iFirefox noma i-Opera, kepha iDolphin Browser ikwazile ukuthatha isiza sakho futhi yazilungiselela njenge esinye seziphequluli zewebhu ezihamba phambili ongayitholela amafoni noma amaphilisi akho. Ibalulekile ekuzulazuleni kwayo okusheshayo ngohlelo lokusebenza, isivinini sayo sokulayisha nezinketho eziningi ezifana nemodi yasebusuku.
i-Google ChromeIsiphequluli esihle kakhulu seselula i-Google ekwazile ukusithuthukisa ukuze sibe esinye sezihamba phambili ze-Android. Kunzima ukukhetha, kungaba ihlengethwa noma i-google, zizame wena.
Izidlali Zomsindo Namavidiyo
I-Spotify: Thatha lesi sikhundla ngoba manje usunokunikezwa okusha lapho insiza yamathebulethi imahhala nakuma-smartphones kungenzeka kudlalwe izinhla zokudlalayo, yize kunokukhubazeka ukuthi izingoma zizodlalwa ngokungahleliwe.
I-VLC: Uma i-VLC iyisidlali esihle kakhulu kumakhompyutha we-PC, enguqulweni ye-Android, une-4 × 4 ukwazi ukuyidlala wonke amafomethi wevidiyo nomsindo ku-terminal noma kuthebhulethi yakho. Ayikwazi ukushoda kumlando wakho wokugcina wezinhlelo zokusebenza ezifakiwe.
Izinhlelo zokusebenza zokuthatha izithombe
Ikhamera360 Ekugcineni: Isicelo samahhala esingakwazi buyisela ngokuphelele onayo njengokujwayelekile ku-Android yakho. Inezinketho eziningi futhi ingcono kakhulu ongayithola ku-Google Play Isitolo.
I-Pixlr Express: Singakukhomba ku-Instagram, kepha namhlanje siyakuthola igugu ongahlela futhi ulisebenzise ngalo Amakhulu ezihlungi ezahlukahlukene ukudala izithombe ezinhle. I-Pixlr Express imahhala ngokuphelele futhi ivunyelwe yi-Autodesk.
INyanga + Reader: Uma uthanda ukufunda izincwadi ezisebenza ngogesi, iMoon + Reader kuyisinqumo esibaluleke kakhulu ukujabulela ukufunda ku-Android yakho. Ine konke okungafunwa esicelweni esinjalo.
EZPDF Reader: Futhi uma uvame ukusebenzisa amafayela wokufunda ngefomethi ye-PDF, i-EZPDF Reader ngolunye uhlelo lokusebenza oluhle onalo umtapo wakho wezincwadi obonakalayo kufoni noma kuthebhulethi yakho.
Imgur: Enye yezinsizakalo ze ukusingathwa kwesithombe semfashini lokho kuze kunikeze namandla okwabelana nawo wonke umuntu ngobuhlakani bakho uma kukhulunywa ngokuthwebula.
Flickr: Uzokunikeza 1 Terabyte ukugcina izinkulungwane yezithombe ozifunayo, njengenye yezinsizakalo ezihamba phambili zokugcina izithombe ku-inthanethi.
Kunezigaba eziningi kakhulu ukuthi sikushiye emthonjeni wenkino, kepha abayishumi nanye okukhulunywe ngabo nakanjani bazovula ama-horizons amasha uma kukhulunywa ngokufunda ngezicelo ezintsha, ngoba asikaze sisho i-Instagram edumile ekuthwebuleni izithombe noma emculweni, isevisi ye-Google Play Music.
Imininingwane engaphezulu - Ungawakha kanjani futhi uwaphathe amafolda abiwe kuDropbox ye-Android
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Izinhlelo zokusebenza ezibalulekile ze-Android
Lungisa ukuphahlazeka ku-Windows 8 ngezinketho zayo eziphambili zebhuthi
Sebenzisa izixhumi zeWindows Desktop Search